Yanovskiy Yan - bibliographer Polish, umlobi wesayensi nompristi. Isithakazelo kumuntu wakhe kubangelwa neqiniso lokuthi wayeseholela negalelo elikhulu ekuthuthukiseni isiko ePoland XVIII leminyaka. Ngaphezu kwalokho, he was fike of labo abasiza ukwakha abazalwane Zaluski lokuqala khulula umtapo Polish.
Yanovskiy Yan: Biography minyaka yokuqala
Umlobi esizayo wazalwa ngo-December 1720 edolobheni elincane Międzychód. Umndeni wakhe ingeyamakhosi okuthiwa ekilasini Sorbian, ethandwa phakathi inzalo ngqo amaSerbia. Kodwa naphezu kwalokhu, nolimi unina kaJohane kwaba isiJalimane, njengoba kusho zonke izihlobo zakhe.
Yanovsky Senior wayeyindoda isinyathelo, ngakho cishe njalo lisetshenziswa. Isinkwa wazakhela nowezingodo, futhi izingubo kanyekanye bathunga kwelinye workshop yakhe. INdodana Janowski wathumela ukufunda e St Cross esikoleni eyayisesandleni naseDresden.
Esikhathini esizayo, imfundo angokomoya kuyosisiza Ian uthole isikhundla obaluleke kakhulu ekuphileni kwakhe. Kufanele kuqashelwe ukuthi Pole esincane sasikanye insizwa onamakhono kakhulu futhi ngokushesha amuncwa ezibonakalayo, ezingashabalala baletha uthisha. Ngaphezu kwalokho, wathatha ukuhlanganyela ngenkuthalo kokuphila okungokomoya esikoleni, ngisho wayecula abafana choir esontweni lendawo.
Njengoba kushiwo ngaphambili, Yan Yanovsky wayengumfundi okhuthele futhi zikhuthale. Ngenxa lokhu 1738 wathola umfundaze, okwathi ngokuhamba kwesikhathi zamarandi ekuqeqesheni e pfortskom Pedagogical University. Njengoba ngaphambili, waziveza ukuba kuphela ohlangothini ezinhle, owamsiza ukuthi benzela abangane bakhe abaningi. Phakathi kwawo kwakunodade owayesuka BH yonisu - indoda, kamuva owaba nethonya elikhulu isiphetho Yana Yanovskogo.
Nokho, le nyuvesi ithole insizwa ulwazi hhayi kuphela, kodwa futhi abanothando entsha. Ngokusho idatha etholakalayo, kuba umfundi, Yan Yanovsky kwaqubula isithakazelo amabhuku nezincwadi. Zonke ngesikhathi sakhe sokuphumula wayehumusha ekutadisheni ezokuzilibazisa, hhayi Ukungalali ngokwanele kuyiwe njalo kuya imitapo engcono yezwe.
Ngo-1945, Yan Yanovsky waphinda wavakashela umtapo ku Dresden. Bheka umuntu abasebasha bahlangana nabangani, njengaye, ngiyakudumisa ngayo yonke inhliziyo yami ethandekayo izincwadi. Phakathi kwazo kwakukhona BH yonisu - aziwayo kakade ngesikhathi bibliographer isikhathi isazi. Nguye owanikhupha ndawonye Janowski futhi Andzheya Zaluskogo.
Lo mhlangano washintsha konke. Abesilisa yashesha ulimi olufanayo, futhi ngokushesha u-Andrzej-Jan ahlinzekwa ukusebenza umfowabo Yuzefa Zaluskogo. Isikhundla wakhanga kakhulu - unobhala siqu kanye yezincwadi. Futhi uma kuqala wathembisa ngihola kahle, wesibili avunyelwe abaningi bahlale umtapo.
Yan Yanovsky wamukela cishe ngokushesha yokunikezwayo abazalwane. Ngo-June 1745 lapho lagcina lithuthele Warsaw, lapho waqa- sha encane. Kule minyaka emihlanu ezayo wamfuna ngenkuthalo wazigcwalisa zonke imisebenzi kaNobhala, futhi, uma kunesidingo, ngenjongo yokusiza abazalwane babheke wezincwadi.
Yesevisi ye-okuhle kweBandla
Novemba 30, 1750 Yan Yanovsky wathatha enkolweni yamaKatolika. Ngaphezu kwalokho, unikezwa lasungulwa ngokomoya, ngokushesha akhiqizwa ubupristi aphansi. Kanye ukholo olusha, wathola ukuthi igama lesibili Andrew-Jozef.
Ngo-December walowo nyaka ofanayo wamiswa njengombonisi ezisohlwini lwezincwadi zeBhayibheli zesiHeberu Skalbmirskuyu ebhodini. Kuleli ehhovisi engcwele wahlala kuze 1760, okwathi ngemva kwalokho wayiswa kwelinye ababhishobhi Kiev sika. Ngokwengxenye enkulu, naso sonke lesi sikhathi, wavele wenza, ukuthi kwaba izinhlu yamaKatolika izincwadi, okuyiwona wathola Enokwazisa okukhulu esontweni.
Umnikelo eyinhloko Andrzej futhi Yuzefa Zaluskih is dalo ngowokuqala umtapo khulula ePoland. Ilungiselela ukutholakala kwakhe kwaqala ngo 1742, futhi ekuqaleni ezisemthethweni senzeka Agasti 8, 1747. Ngokwemvelo, Yan Yanovsky tiphindze ehileleke kakhulu ekuthuthukisweni iphrojekthi onjalo wokufuna izikhundla.
Ekuqaleni, wanikwa inkinga ezincane kuphela. Wayebuka isakhiwo, kwaba izinhlu amabhuku atholakalayo, iqhaza endalini, nokunye. Nokho, ngokuhamba kwesikhathi abafowethu benamandla maqondana Janowski, futhi kwaba yingxenye ithimba labo. Ngokwesibonelo, kuyaziwa ukuthi UJan Jozef wasiza ngokubhala isichazamazwi bibliographical Bibliotheca Polona Magna Universalis.
Sikhishwe zonke kokufaneleka Janowski, akumangalisi ukuthi ngo-September 1747 yafakwa ngasekhanda Library entsha. Zaluski. Ndawonye nabangane bakhe wakwazi ukuqoqa izincwadi ezingaphezu kuka-300 eziyinkulungwane. Futhi 10 eziyinkulungwane. Imibhalo Yesandla, okuyinto kwaba ushintsho olukhulu ngempela feat ngokokuqala.
Yini losalela emuva Yanovskiy Yan? Photo bibliographer, Lutho neze, ngoba ikhamera okokuqala kuyoba kuphela ngemva kokufa kwakhe. Nokho, kukhona umbhalo encane esibonisa Pole lapho usukhulile. Kodwa ngisho kanjalo, inkumbulo yakhe ukuthi bayophila phakade, ngoba izithelo zomsebenzi wakhe Namanje igcinwe National Library. Zaluski. Ngaphezu kwalokho, umtapo ngokwayo kuwubufakazi bokuthi Ian Andrew, Yuzef Yanovsky kwaba umuntu ohloniphekayo futhi omkhulu.
Kuyadabukisa ukuthi lesi umlobi wasePoland wayengakwazi ukulandela iphupho lakhe kuze kube sekupheleni. Ukusebenza izincwadi kwaholela kwamehlo akhe kancane kancane saqala ukwehla. Ngenxa yalokho, ngo-1775 wayengasaboni ngokuphelele. ukuphila ibhalansi Janowski wachitha njengoba umpristi. Washona ngo-October 29, 1786 ku Warsaw.
SU - 122-54: izici lobuchwepheshe, izingxenye Breakout, ukubuyekeza nezithombe